I-Plumbing Franchise - I-Home Improvement Franchise | I-Franchiseek
»Amathuba weFranchise»i-United Kingdom»I-Plumbing Franchise
Okufakiwe Kwamapayipi Wama-Franchise
Amaphayiphu wakamuva wePlumbing
Sula i-Brew Franchise
Okokuhlanza imigqa kabhiya kusukela ngo-2006 Izindlela zethu ezihlolwe futhi ezihloliwe, kanye nezindawo zethu ezingafani neziphathekayo, ezihlanganiswa ngamanzi, ...
Sonke sizinakekela kakhulu izindlu zethu. Kungakho imboni yokudonsa ngamapayipi ikhuphuke iminyaka futhi inesizinda esikhulu samakhasimende salezi zinhlobo zamasevisi. Okokuqala sizokwabelana ngezibalo ezithile kusisekelo samakhasimende okungenzeka ukuthi ziyatholakala embonini yamapayipi ukusiza noma ngubani ukuthola ukuzwela emakethe.
Imakethe yezinsizakalo zamapayipi.
Izinkinga zingenzeka ngaso sonke isikhathi futhi yingakho abantu bethanda ukubiza ochwepheshe nabantu abaqeqeshiwe ngokwengeziwe emikhakheni yabo. Njengoba abantu behlale bemagange ukukhulisa indlu yabo futhi bagijime futhi babe nezinkinga ezilungisiwe. Manje sizokwabelana ngamaqiniso nezibalo eziseduze nomkhakha wamapayipi oqoqwe eminyakeni edlule.
Izibalo eziseduze nomkhakha wamapayipi.
Umkhakha wamapayipi ubone ukukhuphuka kuka-0.8% kule minyaka engu-5 eyedlule ekhombisa ukwanda okuqhubekayo kwesidingo e-UK.
Ubungako bemakethe yase-UK buzungeza amakhawundi ayizigidi eziyizinkulungwane eziyisithupha zamaRandi
Bangaphezu kuka-149,098 e-UK abaqashwe ngaphakathi komkhakha wamapayipi.
Kukhona amabhizinisi amapayipi angama-37,289 XNUMX avuliwe njengamanje e-UK.
Umkhakha wamapayipi eMelika ukhula ngokushesha okukhulu ngokungaphezu kokuphinda kabili ukukhula kwe-UK eminyakeni engu-5 edlule ngokukhula ngo-2.2%
Usayizi wemakethe wamapayipi e-US ubiza ama- dollar ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama- $ 113 amaDola.
Futhi njengamanje kunamakhaya ayizigidi ezingama-27 e-UK.
Kubonisani lokhu emakethe yamapayipi?
Sekukonke lezi zibalo zikhombisa ukuthi imakethe yezinsizakalo zamapayipi ihlala ikhula njalo futhi kunesizinda esikhulu samakhasimende hhayi e-UK nase-US imboni yokuphaka ngamakhulu emhlabeni wonke. Lezi zibalo lapho zinikezwe nje ukukunikeza uzizwe wemboni. Ngakho-ke imboni yezamapayipi iyonke ikhombisa izimpawu ezinhle zokukhula minyaka yonke futhi inikezela ngamathuba emisebenzi amahle kakhulu kubantu abasebenza kakhulu abadinga ukuxhaswa.
Yini ungajoyini lemboni ethokozisayo ngokwenza uphenyo kuyi-planching franchise namuhla eFranchiseek. Futhi uma uzizwa u-planching franchise akusikho ukuthi ungakhathazeki. Ngoba iFranchiseek inikezela ngamanani amakhulu nokwahlukahluka kwamathuba ahlukahlukene we-franchise athengiswa kwamanye amazwe.